HomeWararka MaantaAndre Villas-Boas Oo Ku Eedeeyey Kooxda Guangzhou Evergrande Shilal Gaadhi Oo Lala Beegsaday
Tababaraha Kooxda Shanghai SIPG, Villas-Boas ayaa ku eedeeyey naadiga uu xafiiltanku ka dhexeeyo ee Guangzhou Evergrande inay soo naqshadeeyeen shilal baabuur oo lala beegsaday kooxdiisa oo ay jilbaha isku dareen ciyaarta quarter finalka ee Asian Champions League, kaas oo rikoodheyaal ay ku badisay SIPG.
Labada kooxood ayaa ciyaar laba lugood ahayd isku haleelay Salaasadii, waxaana 4-0 ku badisay Guangzhou oo kulankii hore lagu garaacay goolal intaas le’eg, waxaanay taasi keentay in rikoodheyaal loo dhigo labada kooxood, kaas oo nasiibku 5-4 ku siiyey Shanghai SIPG.
Ciyaarta ayaa wakhti dheeraad ah lagu daray, iyadoo laba ciyaartoy laga saaray SIPG, hase yeeshee, nasiibka ayaa ugu hiiliyey rikoodheyaal, laakiin markii ay dhamaatay ayaa waxa dhacay shilal baabuur oo si badheedh ah loola beegsaday ciyaaryahannada guuleystay ee SIPG.
Villas-Boas oo hore tababare ugu ahaan jiray FC Porto, Chelsea iyo Tottenham ayaa macallin u ah SIPG, waxaana uu ku eedeeyey shilalkaas inay soo abaabuleen kooxda Guangzhou.
Waxa uu tibaaxay tababaruhu in ciyaaryahannada Guangzhou ay si badheedh ah khaladaad ugu galeen laacibka reer Brazil ee Elkeson, kuwaas oo aan wax tallaabo ah laga qaadin. Taas beddelkeeda, waxa uu xusay in goolhayaha SIPG uu garsooruhu siiyey kaadh digniin ah wakhtigii rikoodheyaasha la laagayey, taas oo sharaf dhac iyo ceeb ahayd.
Laacibka Zhang Linpeng oo ka tirsan Guangzhou ayuu sheegay inay ahayd in ciyaartan laga ganaaxo sababtoo ah, suxul uu ku dhuftay mid ka mid ah ciyaartoygiisa kulankii hore.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu tababare Boss sheegay in kooxdiisu ay guul weyn gaadhay, isla markaana ay ku hamiyayaan inay koobka qaadaan.
Villas-Boss ayaa tegay kooxda reer China ee Shanghai SIPG bishii November ee 2016, isagoo beddelay tababarihii hore ee xulka qaranka England Sten-Goran Eriksson.
Celtic Oo siddeed Dhibcood Ka Sare Martay Aberdeen
Benfica Oo Dhirbaaxo Ku Dhufatay Borussia Dortmund, Ciyaar Aubameyang Khasaariyey Rikoodhe
15/02/2017 Abdiwahab Ahmed
Joachim Low: “Waanu Ka Fiicnayn France”
08/07/2016 Abdiwahab Ahmed